Covid19: Codsiyada gunnada bukaanka ee khaaska ah hadda way furan yihiin | HelpRefugeesWork
Wasaaradda Shaqada ayaa goor dambe oo Axad ah ku dhawaqday in codsiyada elektiroonigga ah Gunnada Bukaanka Gaarka ah (EEA2) inay hadda furan yihiin websaydka www.coronavirus.mlsi.gov.cy(ee giriiga) iyo kafaa'iideystayaasha mustaqbalka ay dalban karan hada.
Hadaad ubaahantahay macluumaad dheeri ah ama caawimaad xaga codsashada, waxaad na soo wici kartaa 22205959, naga hel Viber / WhatsApp taleefanka 97767329, ama noogu soo dir cinwaanka info@helprefugeeswork.org.
Waxaa la ogsoon yahay in codsadayaashu sidoo kale ay tahay inay si elektaroonig ah ugu gudbiyaan faahfaahintooda akoontiga bangiga iyagoo adeegsanaya foomka gaarka ah ee laga helo websaydhka sare (EEA6).
Codsadayaasha mustaqbalka ee gunada jirada gaarka ah waa inay fuliyaan shuruudahan soo socda:
- Codsiga gunada jirrada waxaa sameeya shaqaaleha waxaha gaarka loo leeyahay ama kuwa is-kood u shaqeysta ee ku dhaca mid ka mid ah qeybaha soo socda:
i, Shakhsiyaadka ku dhaca liiska kooxaha nugul sida lagu qeexay Wasaaradda Caafimaadka war-saxaafadeedka, taariikhdeye 16/3/2020 ama dib-u-fiirin mustaqbal ah oo ku leh shahaadada la xariirta dhakhtarkooda shaqsiyeed,
ii. dadka ku qasban go'doominta khasabka ah (karantiil) iyo kali ahaanta ku saleysan tilmaamaha Wasaaradda Caafimaadka iyo haysashada Shahaadada Caafimaadka ee ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka, ama sida uu ku faray dhaqtarkooda shaqsiyeed,
iii. dadka qaba COVID 19 oo haysta shahaadada Wasaaradda Caafimaadka,
iv. dadka da'doodu tahay 63-65 sano oo aan helin hawlgabka sharciga waxana lagu so daray noocyada (i), (ii) iyo (iii) korka isla markaana haysta shahaadada u dhiganta.
- Gunnada Jirrada waxa la siiyaa oo keliya dadka shaqeeya muddada ay codsanayaan iyo kuwa ku jira caymiska Khasnadda Caymiska Bulsheed, ay da'doodu tahay illaa 65 sano oo aan qaadan hawlgab sharciyeed.
-gunada jirrada ee la siiya ka-faa'iideystayaasha waxaa loo xisaabiyaa sida soo socota:
i. shaqaalaha iyo dadka iskood u shaqeysta ee u qalma caymiska sida ku xusan xeerka Amniga Bulshada ee 60% qiimaha unugyada ceymiska sida ku xusan Sharciga kore.
ii. shaqaalaha aan u qalmin sida ku xusan Xeerka Amniga Bulshada oo laga caymiyay Sanduuqa amniga Bulshada Janaayo 2020, mushaarka Janaayo 2020 (dakhliyada caymiska ) ama mushaarka ugu dambeeya ee xogta lagu hayo diiwaanka Adeegyada amniga Bulshada. Xaaladdan oo kale Gunnada Jirrada waxaa lagu bixin doonaa shuruudo cayiman, qadarka kaas oo lagu go'aamin doono go'aan ku xiga.
iii. Qofka is-kiis u shaqeysta ee aan u qalmin caymiska, 60% qaddarka toddobaadlaha ee dakhligiisa aan la beddeli karin iyadoo lagu saleynayo dakhliga loogu baahan yahay inuu ku tabaruco amniga Bulshada rubuc-qarniga afraad ee 2019.
iv. qadarka ugu badan ee la bixin karo sida gunada jirada gaarka ah ee shaqaalaha qeybta gaarka loo leeyahay iyo kuwa iskood u shaqeysta muddo hal bil ah kama badnaan karaan € 1,214.
-gunnada jirada lama bixiyo muddadii codsaduhu qaadanayo faa,iidada shaqo la, aanta. faa,iidada shaqo laa,aanta gaarka faa,iidada jirada, ama Fasaxa Gaarka ah ee Ilmaha. Waqtiga la bixinayo lacagta jirrada waxaa lagu xisaabtami doonaa xisaabinta iyo bixinta gunada jirrooyinka ee lagu qeexay sharciga amniga bulshada
- Lacagta jirrada waxa la bixin karaa oo keliya haddii nooca shaqada aanu u oggolaanaynin ka shaqaynta fog guriga ama saacadaha shaqada oo rogrogmi kara.
-Xilliga caymiska jirrada waxaay dhacaysaa Abril 12, 2020.
- Waqtiga la bixin doono lacagta jirrada, loo shaqeeyuhu waxa laga nasiye waajibaadkiisa inuu mushaharka siiyo shaqaalaha helay faa,iidada jirrada.
- Muddada gunnada jirada waa in loo qaddariyo sidii xilli caymis u dhigma oo ujeeddadoodu tahay tabarrucaadka Khasnadda Ceymiska Bulshadda waxaana loo xisaabin doonaa koontada caymiska ka-faa'iideystaha sida wafaqsan .
-Ka-faa'iideystayaasha Dakhliga La-hubo ee Ugu Yar (EEE) ee shaqeynaya oo waaliddiin ah ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara gunada jirrada. gunada Fasaxa Xanaanada Cunugga ee khaaska ah ee la siinayo ka-faa'iideystayaasha Dakhliga La-hubo ee Ugu Yar waxaa loo qaadan doonaa xisaabta iyada oo loo eegayo ujeeddooyinka xisaabinta dakhliga loo tixgeliyay ujeeddada bixinta Dakhliga La-hubo ee Ugu Yar ee muddada -bixinta.
-Go'aankaan wuxuu dhaqan galaya 16 Maarso 2020.
OGEYSIIS : Kani ma aha tarjumaad rasmi ah ee wareegtada laxiriirta. Tarjumida rasmiga ah ayaa la daabici doonaa markay diyaar noqoto.